Kedu ụzọ iji wuo backlinks ngwa ngwa?
Ụlọ njikọ bụ akụkụ mbụ na nke kachasị njọ nke njikarịcha search engine. Ọ na-emetụta ọnọdụ ọkwa saịtị weebụ ma na-eme ka Google mara banyere otu ngalaba. E gosipụtara ọrụ nke njikọ na-abata na SEO na ọnụ ọgụgụ ihe ọmụmụ ihe.
Otú ọ dị, ụfọdụ webmasters ka nwere obi abụọ banyere mmetụta na uru nke njikọ njikọ. Ha na-ekwu na ịdabere na Google na backlinks na-ebelata. Otú ọ dị, m ga-achọ iji ha gaa ebe ahụ. Backlinks enweghị ike ịhapụ n'oge ọ bụla ngwa ngwa ka ha na-arụ ọrụ dị ịrịba ama na Google ranking algorithm. Ihe omumu ndi ohuru na egosi na onu ogugu ndi na ejikọta na akwukwo nke jikoro na onu ogugu karia ihe obula. Ọ bụrụ na ịghara iji data a kpọrọ ihe, gbalịa mee nnyocha n'onwe gị. Tinye ederede ebumnuche gị na Semalt Web Analyzer ma lee anya na peeji nke elu. Ha niile nwere ọtụtụ njikọ na-abata. Ọbụna ma ọ bụrụ na isiokwu gị ezubere iche abụghị oke asọmpi, weebụsaịtị TOP ga-enwe ọtụtụ njikọ na-abata.
N'isiokwu a, anyị ga-atụle otu esi eme ka redlinks ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma. Anyị na-eji ụfọdụ n'ime ndị njikọ ụlọ azum iji bulie anyị inweta website rankings. Anyị nwetara nsonaazụ ọma ma bulite profaịlụ njikọ nke ndị ahịa anyị.
Ya mere, ka anyị gaa n'ihu! Nwere olileanya na ozi a ga-enwe gị iji nweta ihe ọṅụṅụ njikọ dị mma na saịtị gị.
Atụmatụ ime ihe iji wuo backlinks ngwa ngwa ma dị irè
Mepụta njikọ njikọ yana sistemụ ọchụchọ omenala
ochichi, weebụsaịtị nke jikọtara gị na n'oge gara aga ga-eme nke a ọzọ. Ha na-eme ya n'ihi na ha bụrịrị ndị na-akwado ihe ị na-eme na ide. O yikarịrị ka ha ga-enwe mmasị na ọdịnaya ọhụrụ ọ bụla ị bipụtara ma jikọọ ya. Ihe oyiyi na ị nwere nchekwa data nke niile ntanetị weebụ ndị jikọtararịrị gị na ya, ma, ya mere, ga-enwe mmasị na ọdịnaya ọhụrụ gị.O doro anya na ọ ga-abụ ike ime ka azụmahịa gị dị n'ịntanetị dị ka ị ga-esi nweta okporo ụzọ na-abata na saịtị gị.
Ị nwere ike ịmepụta ebe nchekwa data dị na CSE. Ihe niile ị chọrọ bụ ịgbaso usoro ndị a:
Chọta ebe nrụọrụ weebụ nke na-ejikọ gị n'aka;
Jidea isi mmalite ndị a dị ka nyocha ọchụchọ omenala;
Chọta atụmanya njikọ maka ọdịmma n'ọdịnihu.
Debanye aha Google CSE ma mepụta engine engine ọhụrụ n'ebe ahụ. Wee tinye ebe nrụọrụ weebụ ịchọrọ ịchọọ na aha aha nyocha ọhụụ ọhụrụ gị. Na-agagharị na taabụ ọzọ wee hụ uru na cell A1. A ghaghị ịhazi ya dị ka "ngalaba. com. "Ikwesiri idinye mpempe data a n'ime ngalaba" saịtị iji chọọ "na nyocha gi. N'ikpeazụ, pịa bọtịnụ "mepụta".
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ọtụtụ ngalaba site na profaịlụ backlink gị, ịkwesịrị ịgbakwunye ngalaba fọdụrụ na ị nwere. Ọ bụ ya mere ị ga-eji pịa bọtịnụ "dezie search engine" ma tinyekwuo saịtị. Ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ "ịgbakwunye saịtị na nnukwu" ma detuo ndepụta nke ngalaba n'ime igbe. Họrọ ọrụ "gunyere ibe niile na saịtị ndị a" ma pịa "chekwaa. "
Ugbu a, search engine gị dị njikere. Ị nwere ike iji ya chọpụta njikọ njikọ njikọ oge ọ bụla ị bipụtara ọdịnaya ọhụrụ.
Njikọ a na-ejikọta ụlọ nwere ike ịmalite ịrụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na njikọ profaịlụ gị na-eto n'ihi na ị nwere nchekwa data dị omimi nke ebe nrụọrụ weebụ iji chọọ gafee Source .